सौर प्यानलहरू कसरी काम गर्छन्? | best-solar-panels.com
धेरै वर्षको लागि प्रतिज्ञाजनक ऊर्जा आपूर्तिको रूपमा चिनिन्छ, तारा प्यानलहरू ताज र तातो चिन्हहरू, र ओर्बिट संचालित राख्ने सुविधा। तर तथापि तारा प्यानलहरू काम गर्छन्?
केवल राख्नुहोस्, फोन्सहरू, वा सनशाइनको कणहरूलाई अनुमति गरेर सौर सरणीले काम गर्दछ, परमाणुहरूबाट विद्युत् मुक्त गर्न, बिजुलीको प्रवाह उत्पन्न। तारा प्यानलहरू साँच्चै धेरै, सानो इकाइहरू बिजुली घटना कोशिकाहरूको रूपमा उल्लिखित हुन्छन्। (फोटोवोल्टिक मात्र होइन कि उनीहरूले दिनहुँ बिजुलीमा रूपान्तरित गर्छन्)। ढाँचामा धेरै कक्षहरू एक सौर सरणी।
प्रत्येक सेल अनिवार्य रुपमा एक स्यान्डविचमा अर्ध-सञ्चालन सामग्रीको2स्लाइसहरू, कहिलेकाहीं तत्व - इलेक्ट्रनिक्समा प्रयोग गरिएको समान सामानहरू।
काम गर्न, विद्युत घटना को कोशिकाहरु लाई एक विद्युत क्षेत्र स्थापित गर्न को लागी छ। एक बल क्षेत्र को समान धेरै, कि विपरीत ध्रुव को कारण हुन्छ, एक विद्युत मैदान हुन्छ एक पल्ट विपरीत शुल्क अलग हो। यो क्षेत्रलाई आग्रह गर्न, निर्माता "डोप" तत्वले विभिन्न सामग्रीहरूसँग स्यान्डविचको प्रत्येक टुक्रालाई सकारात्मक वा नकारात्मक बिजुली चार्ज दिन्छ।
विशेष गरी, उनीहरु को फोफोरिक तत्व को उच्चतम परत मा, जुन प्रभारी को साथ, अधिक इलेक्ट्रोन्स भन्छन्। बीचमा, अन्डराइडाइड लेयर तत्वको खुट्टा हुन्छ, जुन कम इलेक्ट्रोन्समा वा बिजुली चार्ज हुन्छ। यो सबै तत्व तहहरू बीच जंक्शनमा बिजुली क्षेत्र सम्म थप गर्दछ। त्यसपछि, डेलाइटको गेज बोसनले सहभागी लेप्टन मुक्तलाई दस्तक बनाउँछ, बिजुलीको क्षेत्रले तत्वको जुनसुकै लेप्प्टन बाहिर पुर्याउन सक्छ।
कक्षको विभिन्न भागहरू यी इलेक्ट्रोन्स प्रयोगयोग्य शक्तिमा फ्लिप गर्नुहोस्। कक्षको परिमितिमा धातु अर्धचालक प्लेटहरू विद्युत्हरू एकत्र गर्छन् र तिनीहरूलाई तारहरूमा हस्तांतरण गर्छन्। त्यस समयमा, विद्युत्हरू बिजुलीका सबै बिभिन्न आपूर्ति जस्ता प्रवाह हुनेछन्।
हालै, शोधकर्ताओं ले अल्ट्राथिन, बहुमुखी तारा कोशिकाहरु जो केवल एक हो .3 माइक्रोन मोटो - विषय को बारे मा 1 / 100th एक व्यक्ति को कपाल को चौडाई - र कार्यस्थल पेपर को एक पत्र को तुलना मा बीस पल्ट हल्का हो। वास्तवमा, कक्षहरू हल्का वजन हुन् जुन तिनीहरू एक बुलबुलामा बस्छन्, तर तैपनि उनीहरूले ग्लास-आधारित तारा कोशिकाहरूको रूपमा अधिकतम मात्राको क्षमताको बारेमा ऊर्जा निर्माण गर्छन्, वैज्ञानिकहरूले धेरै मात्रामा अध्ययनमा रिपोर्ट गरे जुन 2016 मा जर्नल भित्र छापिएको छ। जैविक भौतिक विज्ञान। हल्का, अतिरिक्त बहुमुखी तारा कक्षहरू जस्तै यो राम्रो तरिकाले डिजाईन, क्षेत्रीय प्रविधि, वा शायद पहिरनयोग्य भौतिक विज्ञानमा एकीकृत हुन सक्छ।
सौर ऊर्जा प्रविधिको विभिन्न शैलीहरू - तारा थर्मलसँग एकसाथ र सौर शक्ति (सीएसपी) ध्यान केन्द्रित गरिएको छ - जसले विद्युतीय घटनाको सौर प्यानलहरू भन्दा धेरै भिन्न मोडहरू सञ्चालन गर्दछ, तथापि सबैले विद्युत् उत्पादन गर्न वा विद्युत् उत्पादन गर्न वा तापक्रम वा पानी उकालो दिन सक्दछ। हावा।
अर्को: मेरो घरको लागि कति सौर प्यानल चाहिन्छ?